Apokalypsy 12 | Baiboly | Fandikan-tenin’ny Tontolo Vaovao
12 Ary nisy famantarana+ lehibe hita tany an-danitra, dia vehivavy+ nitafy masoandro, ary teo ambanin’ny tongony ny volana, ary nisy satroboninahitra kintana roa ambin’ny folo teo amin’ny lohany, 2 sady bevohoka izy. Ary nitaraina izy fa narary+ nihetsi-jaza efa ho teraka. 3 Nisy famantarana hafa koa hita tany an-danitra: Nisy dragona+ lehibe mena toy ny afo, nanana loha fito sy tandroka folo sady nisy diadema fito teo amin’ireo lohany ireo. 4 Ary ny rambony+ dia nisarika ny ampahatelon’ny kintan’ny+ lanitra, ka nanipy mafy izany tamin’ny tany.+ Ary ilay dragona dia tsy niala teo anatrehan’ilay vehivavy+ efa hiteraka,+ mba handrapaka+ ny zanany, raha vao teraka ravehivavy. 5 Ary tera-dahy ravehivavy,+ dia zazalahy hifehy* ny firenena rehetra amin’ny tehim-by.+ Ary nentina haingana nankany amin’Andriamanitra sy ny seza fiandrianany ilay zanany.+ 6 Ary ravehivavy dia nandositra nankany an-tany efitra,+ izay nisy toerana efa nomanin’Andriamanitra, mba hanomezan’izy ireo sakafo+ azy any mandritra ny enimpolo sy roanjato sy arivo andro.+ 7 Ary nisy ady nipoaka tany an-danitra: I Mikaela+ sy ny anjeliny niady tamin’ilay dragona. Ary niady koa ilay dragona sy ny anjeliny 8 nefa tsy naharesy, sady tsy nisy toerana ho azy ireo intsony tany an-danitra. 9 Koa natsipy mafy ilay dragona lehibe,+ ilay menarana tany am-boalohany,+ ilay antsoina hoe Devoly+ sy Satana,+ izay mamitaka ny tany rehetra misy mponina.+ Natsipy mafy tamin’ny tany izy,+ ary ny anjeliny koa niara-natsipy taminy. 10 Ary nahare feo mafy tany an-danitra aho, nanao hoe: “Ankehitriny dia tonga ny famonjen’Andriamanitsika+ sy ny heriny+ ary ny fanjakany+ sy ny fahefan’ny Kristiny,+ satria natsipy ilay mpiampanga ny rahalahintsika, dia ilay miampanga azy ireo andro aman’alina eo anatrehan’Andriamanitsika!+ 11 Ary izy ireo dia naharesy azy+ noho ny ran’ny Zanak’ondry+ sy ny hafatra torin’izy ireo,+ ary tsy nankamamy ny ainy*+ ireo, na ho faty aza. 12 Noho izany, dia mifalia ry lanitra sy ianareo izay monina ao aminy!+ Loza+ ho an’ny tany sy ny ranomasina,+ fa nidina any aminareo ny Devoly sady tezitra mafy, satria fantany fa fohy ny fotoana ananany.”+ 13 Rehefa hitan’ilay dragona fa natsipy mafy tamin’ny tany+ izy, dia nenjehiny ilay vehivavy+ niteraka an’ilay zazalahy. 14 Nomena elatra roa anefa ravehivavy, dia elatry ny voromahery+ lehibe, mba hanidinany nankany an-tany efitra+ ho any amin’ny toerany. Tany no nanomezana sakafo+ azy nandritra ny fe-potoana iray sy fe-potoana roa ary antsasaky ny fe-potoana,+ mba tsy ho eo anatrehan’ilay menarana.+ 15 Ary ilay menarana dia nandoa rano+ toy ny renirano avy tao aorian-dravehivavy, mba hahafaty an-drano azy.+ 16 Tonga namonjy an-dravehivavy anefa ny tany,+ ka nisokatra ary nitelina ny renirano naloan’ilay dragona. 17 Ary tezitra tamin-dravehivavy ilay dragona,+ ka lasa nandeha niady tamin’ny sisa amin’ny taranany, izay nitandrina ny didin’Andriamanitra sy nanankinana ny asa fitoriana+ momba an’i Jesosy.
^ Na: “hiandry toy ny mpiandry ondry.”